Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ
23-12-2007, 07:15 PM
ပို့စ် 32 ခုအတွက် 129 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ Linux OS Myanmar Version နဲ့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.. မြန်မာလိုနဲ့တွဲပြီးလေ့လာရင် ပိုအဆင်ပြေအောင်လို့ပါ..အဆင်ပြေပါစေ..
အောက်က လင့်ခ်လေးမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်..
Last edited by tu tu; 01-03-2011 at 06:38 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 41 ဦးတို့မှ leostar81 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ခွန်ညီး, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, လူမုန်း, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းသူအောင်, အနိုင်းမဲ့, ကောင်ပေါက်စ, ကျော်ထက်ချိန်, နေသစ္စာ, မောင်ဇော်, မောင်ပေါ်ဦး, သော်ဇင်, အောင်လံလေး, အေးမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, Aaron, amaung344, BamaO, bonge, cherry, g00gle, hazyworld, ko myo, kozaw.dagon, KznT, lu soe, Mandalarthar, Mg Hein, MgNaing, minthumon, nyinyithan, omnitek team, phyomyintthein, tharkaytathar, thura lin, thureinsoe, viva, yelinoo, zo
Visit leostar81's homepage!
Find More Posts by leostar81
26-02-2008, 04:07 AM
Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများကို ဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေပေးသွားပါမယ် ...........မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုတော့ လေ့လာလိုတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ...သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ တင်ပေးသွားပါမယ် .....ကျန်တဲ့ ညီကိုမောင်နှမများလဲ Linux နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်များရှိမယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေပေးလို့ရပါတယ် .......
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ငြိမ်းချမ်းဇော်, amaung344, g00gle, joe1111980, ko myo, MgNaing, minthumon, pannuko, thureinsoe, viva, yelinoo, zo
26-02-2008, 04:08 AM
ပြန်စာ - Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, amaung344, g00gle, joe1111980, ko myo, minthumon, pannuko, viva, zo
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, amaung344, g00gle, joe1111980, ko myo, MgNaing, minthumon, viva, zo
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, amaung344, g00gle, joe1111980, minthumon, viva, zo
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, g00gle, joe1111980, ko myo, minthumon, viva, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, g00gle, joe1111980, ko myo, minthumon, zo
26-02-2008, 04:10 AM
25-08-2008, 06:36 PM
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်က ပါ။ အခုမှစလေ့လာ နေတာပါ။ မြန်မာလိုတွေ့တော့ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကူးလို့မရဘူး။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ပိတ်ထားပြန်ပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြားကနေ တင်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Find More Posts by shanburma
27-08-2008, 11:18 AM
အကို ကမ်းသာယာ ရေ
ကျေးဇူး အရမ်း တင် တယ် ဗျာ
linux က သိပ် ကို လွယ် ကူ တဲ့ OS လို့ ကြားသိရပါတယ် ခင်ဗျာ
အခုလို မြန်မာ ဘာသာ လေး တွေ နဲ့ ရှင်းလင်းပေးထားလို့
ညီလေး တို့ အတွက် လွယ်လွယ် ကူကူ နဲ့ လေ့လာ လို့ ရသွားဒါပေါ့
အဲ့ဒီ့ အတွက်ကျေးဖူး အထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ပို့စ် 733 ခုအတွက် 3,555 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by shanburma
ညီအစ်ကိုများခင်ဗျား ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြားကနေ တင်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မြန်မာနိူင်ငံက သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ifile.it နှင့် zshare.net တို့ကနေ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ ၁ ကနေ ၁၀ အထိပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
သူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေ၊ လူအများကိုဖြစ်စေ မိမိ၏ အချိန်၊ လုပ်အား၊ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကြင်နာမှုတို့နဲ့ ဖြူဖြူစင်စင် ကူညီလိုက်ပါ။ ပေးဆပ်လိုက်ရပြီ၊ ကုန်ကျသွားပြီ လို့ ထင်ရတာထက် အဆပေါင်း များစွာပိုများသော တုန့်ပြန်မှု အကျိုးရလဒ်မျိုး ပြန်လည်ခံစားရပါလိမ့်မည်။
Last edited by tu tu; 13-09-2008 at 02:38 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ PyaitSone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာအေး, နေသစ္စာ, ဖေယျာထက်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, amaung344, aungzawlin, BamaO, blackNwhite, ko myo, kozaw.dagon, lifemark, lu soe, Mandalarthar, minthumon, phyomyintthein, viva
Find More Posts by PyaitSone
ကိုလင်းလင်းအောင် ရေ ကျနော်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ password မခံထားပါဘူး အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ..
အဆင်မပြေတာ ရှိရင် ပြန်ပြောပါခင်ဗျာ...
စစ်တွေသားချေ, lu soe, tunlinaung
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2017
Find More Posts by ရာစုသစ်​
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 41 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလိုတင်ထားပေးတာ .. အကုန်လုံးဒေါင်းလိုက်တယ် နော် .. ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Command line နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့ မြန်မာမှုလေးတွေလည်း လိုချင်ပါတယ် ... တင်ပေးကြပါဦး အကိုတို့ အမတို့ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ viva အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, lu soe
တွေ့ပြန်ပီ အဆင်ပြေရဲ့ လား ။ ကျနော်အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး မဆိုးဘူးဗျ။ ဦးဇေယျာဝင်း ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ပုံလေးတွေပါ ပါတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ အဲဒီထဲက နားမလည်တာ ရှိရင် ကျနော် ကို မေးနိုင်ပါတယ်
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ ...
Last edited by bonge; 08-12-2009 at 10:58 PM.. Reason: လင့်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ပန်းသီးလေး, ဦးသာကြီး, ကျော်ထက်ချိန်, နေသစ္စာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အေးမင်းမောင်, amaung344, g00gle, joe1111980, lu soe, minthumon, spaceboy, viva, zo
ွှ့Thx for Your post koBonge .. now i using him who Fedora 11 ... lastday insatll font that --> ..http://zawgyi-keyboard.googlecode.co...d-0.1.1.tar.gz But i can't see myanmar font .. why ? .. pls reply me ..
i can only read myanmar font :( .. Gar !!! i wanna type zawgyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii font... pls pls pls ... How do i wanna do that ?
Here see it !!
ဟိဟိ .. ဒီဘက်ဝင်းဒိုး(w7)ကနေပဲ လာရေးတော့မယ် .. ကျွန်တော်ကို ပြန်ပြောပါဥိး ကိုဘိုငယ် .. အကိုတင်ပေးထားတာလေး ဒေါင်းပြီးဖတ်ကြည့်တယ် .. ခက်တာက ဖောင့်က ဘာဖောင့်လည်းမသိဘူး .. ကျွန်တော် ဆီမှာ ဖတ်လို့မရဘူး .. windding font ပုံစံ သင်္ကေတတွေပဲပေါ်တယ် ... လုပ်ပါဦး.. ဖတ်ချင်လွန်းလို့ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ viva အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
09-12-2009, 05:31 AM
အကို ပြောတာလဲ ကျနော် လုပ်ကြီးပီးသွားပီဗျ။ သူပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်ထားပဲ ဘာမှ မရဘူး မြန်မာ font မြင်အောင်တော့ လုပ်လို့ ရတယ်ဗျာ။ အဲဒါကတော့
command line ကနေ မြန်မာ font တွေ ကို ကူးပြီး
/usr/share/fonts/mm3 ဖိုင်ထဲကို command နဲ့ ကူးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို font တော့ မြင်ရပါပီ font ရိုက်လို့ ရအောင်တော့ ကျနော်လဲ နည်း ၂နည်းနဲ့ စမ်းကြည့်ပါတယ်။ မရသေးဘူး။ အိပ်ချင်သွားပီဗျာ။ မနက်လဲ ကျောင်းသွားစရာရှိလို့ ပါ နောက်နေ့ မှ ထပ်စမ်းကြတာပေါ့ ဗျာ
ဒီမှာလဲ တစ်နည်းရှိတယ် ရိုက်လို့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ သူပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက် လုပ်တာပါပဲ။ စမ်းကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
ကို viva ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ပါစေ ဗျာ ...
Last edited by bonge; 09-12-2009 at 05:34 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, g00gle, viva
အကိုအိပ်သွားလည်း ကျွန်တော်တော့ အိပ်သေးဘူးဗျ .. ဟိဟိ ..။။။ ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ... ဆရာဂိုကြီးခေါ်ရာလျှောက်သွားနေတာ .. အခုမှ အိပ်ချင်လာတယ် ... အိပ်တော့မယ် .. မအိပ်ခင် လင်ဒ့်လေးတွေပေးခဲ့ဥိးမယ်.. ကျွန်တော့်အပါအ၀င် Linux user newbie တွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်တာတွေ တင်ပေးခဲ့မယ်နော် ..For Command line တွေပါ .. ကိုဘိုငယ်တို့ကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ... ဟုတ်တယ်ဟုတ်....
Linux user များ command တွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်စွာ ခုန်ပေါက်နေနိုင်ကြပါစေ ...
Last edited by viva; 09-12-2009 at 10:08 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ viva အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂတုံးလေး, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, ဦးသာကြီး, bonge, g00gle, lu soe, minthumon, spaceboy
10-12-2009, 03:53 AM
ကျွန်တော် တော် အဆင်ပြေသွားပြီ ကိုဘိုငယ်ရေ.. ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီဝမ်း လိုတော့ ပါဖက်မဖြစ်ဘူး .. ကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်သလောက်တော့ ဒီကောင်ပဲရှိတယ် .. ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ် အကိုစမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ ...
Kobox2 တို့ ရေးထားတဲ့ ဖောင့်တွေပါ .. ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတာက zawgyi_keyboard-0.3.3.tar.gz နဲ့ပါ ..
ဇောဂျိဝမ်း မဟုတ်ပေမယ့် အကိုစမ်းသုံးကြည့် နည်းနည်းလေးပိုလွယ်တာ တွေ့လိမ့်မယ် ... ဟိဟိ ....
အဲ .. ဂျီတော့မှာတော့ မရဘူးဗျ ရှာတုန်း ....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ viva အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, bonge, lu soe
15-12-2009, 11:23 AM
Originally Posted by leostar81
အကိုရေ စကားဝှက်က အကိုပြောတဲ့ WWW.Myanmarfamily.Org ကို ရေးတာပဲ....
ဒါပေမဲ့ မှားနေတယ်ပဲ ပြောနေတယ်........
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ လူမုန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
space တခုပါနေပါတယ် ။
notepad မှာဖြစ်ဖြစ် ဖယ်ပြီးမှ သုံးကြည့်ပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ waihtutpai အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော် ဒေါင်းပြီး ဖွင့်ကြည့်တာတော့ pdf ဖိုင်ဗျ။
password မတောင်းပဲ ဖွင့်လို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် rar နဲ့ ပြန်တင်ပေး လိုက်တယ်ခင်ဗျာ။
္စ္စpassword မခံထားပါဘူး ခင်ဗျာ။
Last edited by phyothuhein; 15-12-2009 at 11:31 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, လူမုန်း, bonge, minthumon, sAnDViper, spaceboy
အခုလို Linux နှင့် ပတ်သက်တာတွေကို ရှာဖွေ စုဆောင်း တင်ပြပေးတဲ့ အကိုတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါလို့ ရိုရိုသေသေပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်လည်း Linux Beginner တစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာနေပါတယ်။
လာလည်ကြပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာတွေကို လေ့လာပါ။ မေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အကြံပြုပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ spaceboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ်5ခုအတွက် 31 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Find More Posts by themoon49
ကျွန်တော်ကအခုမှ လင်းနစ် ကိုမလုပ်တက်လုပ်တက် လျှောက်လုပ်နေတာပါ
ကျွန်တော့ Ubuntu မှာ Wine သုံးပီး Gtalk ကိုသုံးကြည့်တာ အင်တာနက်မရဘူးခင်ဗျ Could not authenticate to server ဆိုတဲ့
ပို့စ်နံပါတ် ၄၈ မှာ Ubuntu အတွက် gtalx သုံးဖိုးဆွေးနွေးပေးထားဒါရှိတယ် ..သွားပြီးတချက်လောက်
ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, minthumon, sAnDViper, themoon49, zo
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 26 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by themoon49
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ အောင်လံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, bonge, g00gle, minthumon, thureinsoe, zo
Find More Posts by အောင်လံလေး
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 26 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ (download )မ၇လို့
Linux မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ က ဒေါင်လုပ်မ၇တော့ဘူး။ကျွန်တော်လင်းနစ်ကိုစပြီးလေ့လာနေလိုပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကြယ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကြယ်လေး
ubuntu ebooks, ubuntu knowledge
ပီစီအဟောင်းတစ်လုံးကို Linux သုံး၍အသက်ဆက်ခြင်း poekaunglay87 Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ416-10-2008 08:01 PM